Esi egwu Mario Bros na ekwentị mkpanaaka | Gam akporosis
Etu esi egwu Mario Bros na ekwentị
Ignacio Lopez | 07/05/2021 18:00 | Emelitere ka 10/05/2021 11:24 | Egwuregwu gam akporo, Super Mario Run
Mario na Sonic bụ egwuregwu abụọ kachasị na-aga n'ihu na-aga n'ihu karịa afọ 30 mgbe ha rụsịrị ahịa. Mario na Sonic ghọrọ ndị odide metụtara Nintendo na Sega n'otu n'otu na kemgbe ọmụmụ ha ha enweela otutu aha na aha mmegharị ihe nkiri.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Sega hapụrụ ahịa njikwa, Sonic ka nọ n'oge, dị ka Mario, akụkọ ifo Nintendo bụ onye gafere na nke ọ bụla n'ime nkasi obi nke nnukwu ndị Japan malitere na ahịa, na-eru mobile ngwaọrụ.
Agbanyeghị, mmegharị ahụ erutela na ngwaọrụ ndị ahụ enwebeghị ihe ịga nke ọma Nintendo nwere ike ịtụ anya ya, n'ihi nke ụlọ ọrụ ebe ọ chọrọ enye a dị nnọọ iche ahụmahụ nke ọ na-enyekarị na ọdịbendị, ma na-enye, site na njikwa ya, nke mechara mee ka ụlọ ọrụ ahụ chegharịa ụdị aha a na ngwaọrụ mkpanaka, ruo n'ókè nke ịkwụsịtụ nwa oge ahụ.
Naanị ohere igwu egwu ọ bụla n'ime ọtụtụ nsụgharị nke Mario bụ site na Nintendo console. Ma, na mbata nke mobile nsụgharị na iji emulators na ndị ọzọ na aghụghọ, anyị nwere ike kpọọ Mario Bross na ekwentị n'ụzọ dị mfe ma, mgbe ụfọdụ, akwụghị ụgwọ ọ bụla.
Nintendo bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-enyo enyo karịa ihe ọgụgụ isi ha, site na ikikere site na Disney, ya mere, ọ na-eme ihe niile ọ bụla iji kpochapụ nhọrọ ọ bụla dịnụ iji kpọọ aha Mario site na ịntanetị, dị ka o kwere mee.
Ulo oru a ruru ka ha juo YouTube ga-ewepu gameplays gị aha, agagharị na ọbụna ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya weere dị ka ihe nzuzu oge ụfọdụ, ebe ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ahụ mere ya ma ghara ikwe ka ndị nwere mmasị na egwuregwu ahụ lelee vidiyo banyere egwuregwu, ogo ihe osise ... nke aha ha bu n'uche zụta.
Hapụ ihe nzuzu nke ụlọ ọrụ Japan were na afọ ndị na-adịbeghị anya, ma na-aga n'ihu na-ewere, ebe a ka anyị gosiri gị otú e si akpọ Mario Bross na gam akporo mobile.
5 Lep Worldwa
6 Super Jabber ima elu 3
7 'Swa Bob
8 Jiri emulator
Super Mario Run bụ aha mbụ Nintendo wepụtara maka ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ ọdịda zuru oke. Ihe kpatara ya ejighi egwuregwu egwuregwu ọ na-enye, nke nwekwara, kama ọnụahịa nke ịzụrụ ihe na-enye gị ohere ịnweta ọdịnaya niile dị na egwuregwu ahụ: 10,99 euro.
Ọnụ oke, n'agbanyeghị agbanyeghị anya na ya, maka aha ebe naanị ị ga-pịa na ihuenyo maka Mario ka ịwụda ihe mgbochi na ịnakọta mkpụrụ ego ndị a ma ama. Aha a, na-etinye anyị n’aka egwuregwu egwuregwu anọ: ụwa, agbụrụ, Remix 10 na Alaeze m.
Super Mario Run na-etinye anyị 6 ụwa na ọkwa 24 inwe ike iru ulo-elu nke Nchọgharị ma nwee ike ịtọhapụ Princess Peach. Iji nwee ike ịnụ ụtọ aha a, gam akporo 4.4 ma ọ bụ karịa ga-ejikwa smartphone ahụ. Ọ chọrọ njikọ internetntanetị.
Aha nke abụọ nke ụlọ ọrụ Nintendo gosipụtara nke njirimara ya bụ Mario Kart Tour, egwuregwu ọzọ anyị nwere ike ibudata n'efu mana nke ahụ gụnyere in-app ịzụrụ ụdị nile, gụnyere ndenye aha, dị ka a ga - asị na ọ bụ igwe oghere.
Gụnyere ọtụtụ ọnọdụ iji soro ndị enyi ndị ọzọ gwuo egwu. Ka anyị na-emeri agbụrụ, anyị na-aga akpọghe ụgbọala na odide ọhụrụ, ịbụ onye enyemaka dị ukwuu iji nweta kpakpando niile anyị na-ezute n'ụzọ iji nweta baajị egwuregwu niile.
Mario Kart Tour, dị ka Mario Run, chọrọ njikọ permanentntanetị na-adịgide adịgide, nwere ike ịgụnye mgbasa ozi (dịgasị site na mba) ma chọọ Android 4.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. In-app ịzụrụ na-aga site na euro 2,29 ruo euro 74,99.
Site na ọnụahịa ndị a, ọ dị mma na Nintendo kwadoro na ọ ga-ewe oge eweghachila mmeghari ohuru nke egwuregwu gị maka ngwaọrụ mkpanaka. Naanị aha nke mmegharị niile nke onye nrụpụta a na-arụ ọrụ na ahịa maka ngwaọrụ mkpanaka abụwo Fire akara Heroes y Animal agafe.
Dr. Mario World bụ aha ọhụụ na-agụ Mario, ọ bụ ezie na, n'adịghị ka ndị gara aga, ọ bụghị ebumnuche n'onwe ya, mana anyị ga-afanye isi anyị ka anyị nwee ike idozi nsogbu ndị ahụ. 600 usoro na ha na-etinye n'aka anyị iji kpochapụ nje bacteria na ọgwụ.
Anyị nwere ike ịdabere na enyemaka nke Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Toad, Wario, Waluigi, Daisy, Estela, Donkey Kong, Caco Gazapo, Koopa, Lakitu n'etiti ndị ọzọ na egwuregwu nke chọrọ njikọ internetntanetị, dị maka nbudata n'efu ma gụnye ịzụrụ ihe ntanetị sitere na euro 2,29 ruo euro 74,99 ma chọọ Android 4.4.
Ihe mbu anyi kwesiri ima banyere aha a bu na obughi Nintendo mbụ. Super Adventure na-egosi anyị agwa yiri nke Mario (ọ bụ otu) nke anyị ga-awụli iji chịkọta mkpụrụ ego, zere ndị iro ma mezue ọkwa niile. Ihe kpatara Nintendo ewepụbeghị ya bụ maka agunyeghi aha Mario na nkowa, ma obu n’aha ahu ma ọ bụ n'egwuregwu ahụ n'onwe ya.
Super Adventure Jungle World 2021 dị maka gị budata kpamkpam n'efu ma gụnye mgbasa ozi, ma ọ nweghị ịzụ ihe na ngwa. Iji nwee ike ịnụ ụtọ aha a, Android gam akporo ga-ejikwa ya gam akporo 4.1 ma ọ bụ karịa.
Developer: Egwuregwu Super Max
Karịa Nbudata 100 nde na nkezi nke kpakpando 4.4 si 5 kwere omume dabeere na ihe karịrị 1 nde kwuru, anyị na-ahụ Lep World, a egwuregwu na-edepụta aesthetics na ọrụ nke Mario Bross ma na kpamkpam dị iche iche na-agụ akụkọ, na gnomes.
Epwa Lep bụ egwuregwu n'ezie kwesiri ime Nintendo mgbe o weputara Mario Run maka ngwaọrụ mkpanaka, egwuregwu nke anyị nwere ike ijikwa ike karịrị ịwụli elu. Ebumnuche agwa anyị (anyị nwere 8 dị iche iche ịhọrọ) bụ inyere Lep aka ịchọta ọla edo ya.
Utu aha a na-etinye anyị n’aka ndị ọzọ Ọnọdụ 160, ụwa 6 nwere isiokwu dị iche iche, ndị iro 9 ma ọ dị maka nbudata n'efu, ya bụ, ọ gụnyere gụnyere ịzụrụ ihe ngwa sitere na euro 0,75 ruo euro 99,99. Iji wụnye aha a na gam akporo ngwaọrụ, ọ ga-ejikwa ya gam akporo 4.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Super Jabber ima elu 3
Egwuregwu ọzọ nwere ọgwụ mara mma nke a hụrụ na Mario bụ Super Jabber Jump 3, aha nke na-eji bọọdụ afụ ọnụ nke ejiri onye nwere afụ ọnụ dochie anya ndị ọrụ a maara nke ọma. onye paireti onye nwere na-anakọta ego ọzọ n'ogo niile ọ na-enye anyị.
Jabber onye protagonist anyi nwere ike ima elu, gba oso ma dakwasị ndi iro ya 5 ụwa ọ bụla na onye iro ikpeazụ ya. Ọrụ Jabber bụ iji nwetaghachi ọla nke ezuru ya ma mee ya, ọ ghaghị imeri ọkwa 100 nke aha a na-enye anyị.
Super Jabber ima elu 3 dị maka gị budata kpam kpam n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa nke nwere ugwo sitere na euro 1,09 rue euro 10,99. Obere gam akporo iji wụnye aha a na gam akporo gam akporo 4.1
'Swa Bob bụ aha dabere na nke atọ gara aga bụ nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke egwuregwu na imewe nke Mario, mana nwere agwa dị iche na ebe ihe onye anyị ji akwado anyị, n'okwu a bụ Bob, bụ zoputa adaeze, mgbe ị na-awụli elu, na-agba ọsọ, na-agbapụ ma na-agbachitere ndị iro.
Otu uru enyere aha a bụ na ọ chọghị njikọ intaneti. Ọ dị maka gị budata kpam kpam n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa sitere na site na 1,99 euro ruo 10,99 euro, ịbụ ihe dị mkpa gam akporo 5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị iji wụnye ya na ngwaọrụ gam akporo.
Bob's World 2020 - egwuregwu na-adịghị n'ịntanetị n'efu
Ọ bụrụ na aha ndị Nintendo wepụtara ha anaghị eme ka i kwetaDị ka na-akpali uzo ozo na m gosiri gị, i nwere ike ime ka ojiji nke emulator na gị Nintendo ngwaọrụ. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere emulators, anyị ga-ekwu maka RetroArch, ihe kacha mma obe-ikpo okwu emulator maka ihe ọ bụla njikwa.
Na mgbakwunye, ọ bụ oghere mepere emepe yana n'efu kpamkpam, yabụ naanị ị ga - echegbu onwe gị maka ịntanetị maka ROM nke ụdị Mario nke kachasị amasị gị. Agunyeghi mgbasa ozi ma obu nzuta ihe di n'ime app, na-enye anyị ohere ịhazi njikwa ndị masịrị anyị, dị na Spanish ...
Weghachite anyị na-enye gị ohere igwu egwuregwu ọ bụla na njikwa ọ bụla site na ihuenyo, ọ bụ ezie na ọ dakọtara na njikwa akara, yabụ ọ bụrụ na ị nwere otu n'ụlọ, ahụmịhe egwuregwu ga-adịkwu ụtọ ma karịa ihe niile, dị mma, ma ọ bụrụ na ị jikọọ mkpanaka gị na telivishọn gị.
Ke adianade do, o nwere ọwa na Discord ebe i nwere ike ịjụ ajụjụ, anya n'ihi na ROMs, anata oru nkwado, ọ bụ ezie na site na ya ọwa nke YouTube Will ga-enwe ike idozi imirikiti obi abụọ metụtara ihe ngwa ahụ na-enye gị yana otu ị ga - esi mee ya.
Nhọrọ ọzọ na-adọrọ mmasị enweghị nwere wụnye nnọọ ngwa ọ bụla na ngwaọrụ anyị bụ site na Minigames web, ebe a nkebi, anyị nwere ọtụtụ nsụgharị, anyị na-akwadoghị nke Mario na ndị enyi ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Super Mario Run » Etu esi egwu Mario Bros na ekwentị
Mario Bros. Na-aga na otu S na njedebe…. oh my ...
Ngwa 5 kachasị mma iji mepụta logos na gam akporo